Igumbi elilingeneyo leentsapho ezisembindini.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguJosé Ignacio
Yiza kwaye uphile amava e-gastronomic kunye nenkcubeko yokuhlala kumbindi weVitoria-Gasteiz. Igumbi elibanzi le-30m² elinegumbi lokuhlambela labucala, apho unokuphumla khona emva kokundwendwela zonke iikona ze-Capital ye-Euskadi kunye neendawo eziyingqongileyo.
Ungandwendwela iziko lonke ngeenyawo ... IPlaza de la Virgen Blanca, Casco Viejo, Old Cathedral, Plaza de España kuba ingaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokulala. Isitalato esizolileyo ngaphandle kwengxolo.
Izithuthi zikawonke-wonke, isibhedlele saseSantiago kunye nendawo yokuthenga iimitha ezingama-50 kude.
I-Intanethi ngeWiFi okanye intambo ye-ethernet yasimahla.
I-TV ene-MOVISTAR + SIMAHLA.
Sibonelela ngezinto zokulala, iitawuli, ijeli yokuhlamba, ishampu, isithambisi selaphu kunye nesomisi seenwele.
Sinikezela ngebhodi yoku-ayina kunye nentsimbi kuye nabani na oyidingayo.
Yonke into oyifunayo uze nomntwana wakho:
Sazise ngaphambili ukuba siyilungiselele.
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.82 · Izimvo eziyi-204
Umbuki zindwendwe ngu- José Ignacio
UJosé Ignacio yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vitoria-Gasteiz